Sunday October 06, 2019 - 09:13:13 in Wararka by Super Admin
Go'aan kasoo baxay nidaamka Aala Sacuud ayaa lagu sheegay in lalaalay xeerkii ahaa in ragga iyo dumarka kala ajaanibta ah aysan isla jiifan karin Hoteellada iyo guryaha.
Hay'adda guud ee Dalxiiska Sacuudiga ayaa sheegtay in durmarka Sacuudiyaanka ah iyo ragga ay ufasaxanyihiin in ay isla jiifsadaan Hoteellada iyagoo aan isqabin islamarkaana ay xuriyad u leeyihiin in ay sameeyaan wax ay doonaan.
Dadka dalxiisayaasha Ajaanibta ah ayaa lagu wargeliyay in laqaaday xayiraaddii saarneed in ragga iyo dumarka ay soo gudbiyaan warqadaha muujinaya in ay isqabaan balse hadda aan wax caddeymo ah laga rabin.
Tallaabadan ayaa looga gol leeyahay in dadka Ajaanibta gaalada ah ay tamashle iyo fisqi ku dhax faafiyaan bulshada dhulka Xarameynka, hay'adda dalxiiska Sacuudiga oo u dhiganta wasaarad ayaa bishii lasoo dhaafay sheegtay in ay fiisaha dal kugalka ay ka cafisay muwaadiniinta kasoo jeedda illaa 49 dowladood oo ubadan reergalbeed.
Qorshaha ayaa ah in Sacuudiga ay booqasho dalxiis ku tagaan dad gaaraya 100 kun oo qof inta aan lagaarin sanadda 2030-ka.
Max'med Bin Salmaan oo ah dhaxal sugaha Sacuudiga ayaa qaaday tallaabooyin ka dhan ah shareecada Islaamka wuxuuna arrimahaas u sameynayaa si uu uraalli geliyo Mareykanka iyo Yahuudda.